U fiirso Midwest Hoggaanka Cimilada ee Maraykanka
By Tonya Allen, Sarah Christiansen
Qoraalkan ra'yiga ah waxaa markii hore daabacay Newsweek Oktoobar 3, 2021. Waxaa dib loogu daabacay halkan iyadoo oggolaansho buuxa laga haysto.
Iyada oo uu socdo Shirka Qaramada Midoobay ee Isbeddelka Cimilada (COP26) ee Glasgow, dhammaan indhuhu waxay ku jeedaan Washington, DC, iyada oo qaranku sugayo wada xaajood adag oo ku saabsan qorshaha kharashgaraynta ee Madaxweyne Joe Biden. Laakin iyada oo aan loo eegin waxa ka dhacaya Capitol Hill maalmaha soo socda, kuweenna halkan Midwest waxay rabnaa in dunidu ay ogaato in Maraykanku ay ka go'an tahay xalinta isbeddelka cimilada-iyo Midwest waxay durba samaynaysaa horumarro waaweyn.
Wadnaha Ameerika ayaa ku dhawaad saddex meelood meel ka ah sii daynta gaasta aqalka dhirta lagu koriyo ee dalka—waana ka shanaad ee ugu weyn hawada sare ee kaarboonka adduunka. Kala duwanaanshahan shakiga leh ayaa gobolka ku kalifay in uu si deggan u dayayo hoggaanka cimilada iyo hal-abuurnimada.
Haddii Mid-galbeed ay ahaan lahayd waddan ay iyadu leedahay, waxay noqon lahayd ka shanaad ee ugu weyn ee hawada ka saara kaarboonka adduunka.
Midwest qaranka u horseeda Soo saarista tamarta dabaysha, waxaanan ku jirnaa safka hore ee cadceedda bulshada — kaxaynta dhimista sare ee qiiqa iyo kordhinta helitaanka tamar nadiif ah. Waxaan hal-abuuraynaynaa sida aan dalka u quudinno, anagoo ku shaqaynayna beero waara oo hawada ka saara kaarboonka. Waxaan dhignay in ka badan 677,000 Mid-westerners si ay uga shaqeeyaan shaqooyinka mushaharka fiican ee soo saarista iyo rakibidda qaybaha tamarta la cusboonaysiin karo, baabuurta, baytariyada iyo tignoolajiyada hufan si ay u xoojiyaan dhaqaalaha berrito.
Waxaan sidoo kale aragnaa hoggaanka cimilada ee labada xisbi ee ka jira hoolalka magaalada iyo xarumaha gobolka. Laga soo bilaabo Kansas City ilaa Madison, Cincinnati ilaa Petoskey, Magaalooyinka iyo magaalooyinka Midwestern-weyn iyo yar yar, casaan, buluug iyo guduud - waxay sameeyeen 100 boqolkiiba ballanqaad tamar nadiif ah. Dhawaan, Illinois ayaa la ansixiyay "biilka cimilada 'ugu sinnaanta'"Dalka, isagoo ballan qaadaya inuu u wareego 100 boqolkiiba tamar nadiif ah 2050. Sharcigan taariikhiga ah wuxuu abuuri doonaa tobanaan kun oo shaqooyin cusub ah wuxuuna wanaajin doonaa caafimaadka bulshada iyadoo mudnaanta la siinayo dhimista qiiqa qiiqa ee bulshooyinka ay saameysay ku tiirsanaanta shidaalka fosil.
Guddoomiyaha Gobolka Illinois JB Pritzker ayaa saxeexay Xeerka Cimilada iyo Shaqooyinka Loo Simanyahay ee Gobolka. Xuquuqda sawirka: Anthony Vazquez/Chicago Sun-Times iyada oo loo sii marayo AP
Taasina kuma koobna.
Tobanaan sano oo la qabatinka dhuxusha ka dib, adeegyadii waaweynaa waxay bilaabeen inay beddelaan jihada - marag u ah horumarka xoogaga suuqa iyo u doodista muwaadiniinta. Xcel Energy xarunteedu tahay Minnesota ayaa ugu horeysay Utility weyn ee Maraykanka in ay u go'aan 100 boqolkiiba tamarta nadiif ah, iyo kuwa kale ayaa raacay.
Waxaas oo dhan inta ay jiraan shaqaale xirfad leh oo jooga GM iyo Ford soo saar baabuur koronto oo dib u samayn doona gaadiidka sida aynu u naqaano-oo si weyn u yareeya wasakhowga kaarboonka qaybta mas'uulka ka ah si loo soo saaro saamiga ugu badan.
"Dunidu waxay u baahan tahay Maraykanka si ay u gaarto yoolkeeda cimilada, Maraykankuna wuxuu u baahan yahay Midwest-waa mid sahlan."
Weli, saacada cimiladu waa soo dhacaysa. Wax-soo-saarka dalaggayadu waxay ka engegan yihiin abaaro daba-dheeraaday. Carruurteenu waxay ku xiiqayaan wasakhowga Heerarka tayada hawada ugu xun diiwaanka ku jira. Harooyinkayagu waa gubanayaan. The Biyaha Xuduudda, silsilad harooyin biyo nadiif ah oo ku yaal waqooyiga Minnesota, ayaa la xiray toddobaadyo sababtoo ah dabka ka kacaya.
Way caddahay inaan hadda u baahanahay isbedello hami leh. Xilligan waxa uu dalbanayaa maalgelin federaali ah oo taariikhi ah, oo aan horay loo arag iyo deeqaha samafalka iyo raasumaalka ganacsiga gaarka loo leeyahay si ay u sii wadaan dardargelinta halkan Midwest, ee danta dalka iyo meeraheena.
Shaqaalaha General Motors waxay isku xiraan batteriga hoosta Chevrolet Bolt EV oo qayb ahaan la isugu keenay oo ku taal Golaha Guud ee Motors Orion ee Orion Township, Mich. Photo credit: REUTERS/Rebecca Cook
Haddii Maraykanku uu rabo inuu ku hoggaamiyo cimilada-oo waa inaan-eegno Midwest. Maalgelinta dadka iyo xalalka halkan waa sharadka caqliga iyo istiraatijiyadeed. Waxaan diyaar u nahay inaan sare u qaadno moodelladayada hal-abuurka leh si Ameerika ay ugu awooddo ganacsigeeda, dhismaheeda, guryaheeda, baabuurteeda iyo beeraheeda tamar nadiif ah. Haddii aan ku awoodno dhaqaalaheena qoraxda iyo dabaysha, oo aan ku naqshadayn karno dhismayaal tayo leh iyo shabakado caqli-gal ah halkan-gobol ay ka kooban yihiin dawlado kala duwanaansho ahaan iyo siyaasad ahaanba halkaas oo heerkulku hoos uga dhici karo eber-waxaan ku samayn karnaa meel kasta.
Waxa ka dhaca Washington iyo Glasgow waxay saameyn qoto dheer ku yeelan doonaan Midwest-hawadayada, magaalooyinka, magaalooyinka iyo carruurtayada. Hase yeeshe, waxa ka dhaca Midwest waxay samayn karaan ama jebin karaan horumarka cimiladu adduunka oo dhan. Dunidu waxa ay u baahantahay US si ay u gaadho yoolkeeda cimilada, Maraykankuna waxa uu u baahan yahay Midwest — way fududahay. Waxaan diyaar u nahay inaan hogaamiyo, waxaana rajeyneynaa in Washington ay nagu soo biirto. Guusha aan ku gaarnay kaarboonbaynta Midwest-galbeed waa guusha qaranka—iyo adduunka—guusha.
Soo dejiso a nooca daabacaha-saaxiibtinimo ee maqaalkan.
Helitaanka Xalka Cimilada ee xididdada ka leh ciidda
Furaha Abuuritaanka Xalka Cimilada ee loo siman yahay